Home Wararka Maxaa looga hadlay kulankii Dr Mutlaq uu la qaatay Muktaar Roobow yo...
Maxaa looga hadlay kulankii Dr Mutlaq uu la qaatay Muktaar Roobow yo Xasan Dahir Aweys
Mudo laga joogo afar asbuuc ayaa wakiilka gaarka ah Wasiirka Arimaha Dibada ee dalka Qatar u qaabilsan arimaha argagaxisada waxa uu Mogadishu ku yimid safar shaqo.
Safarka ergayga ayaa waxa uu lahaa afar ujeedo oo salka ku hayso danaha dowlada Qatar ka lahayd dalka Soomaaliya iyo Guud ahaan mandaqada Geerka Afrika. Afarta ujeedo waxa ay kala ahaayeen;
Soo celinta xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya oo in mudo ah ay ka dhaxeeysay xurguf siyaasadeed, Qatar ayaa dano gaarka ah ka leh dalka Kenya, gaar ahaan shidaalka ku jira badda Soomaaliya.
Qaabkii ururka Al Shabaab looga qaybgalin lahaa siyaasada dalka iyada oo la sameeynayo dib u heshiisiin u dhaxeeysa ururka Al Shabaab iyo dowlada Farmaajo
In Qatar ka shaqeeyso sidii Somaliland iyo Soomaaliya la isugu soo dhawayn lahaa, iyada oo guushaan ay qaadanayso dowlada Qatar, hadii natiijo fiican laga gaaro wadahadaladaas.
Iyo in Qatar qayb weyn ku yeelato xal u helida Geedi Socodka arimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya.
Iyada oo ay dowlada Qatar doonaysay in meel marsato arimaha kor ku xusan ayaa hadana waxa ay si qaasa u xiisaynaysay in ay xal ka keento ururka Al Shabaab. Dalka Qatar ayaa lagu xantaa in ay si dadban u taageerto ururka argagaxisada Al Shabaab.
Hadaba intii uu Dr. Mutlaq bin Majed joogaa magaalada Muqdisho waxa uu kulan gaar ah la qaatay Mukhtaar Rooboow iyo Shiikh Xasan Daahir Aweys kuwaas oo u xiran dowlada Farmaajo.
Kulanka oo dhacay habeenkii bisha May ahayd 6da oo ku beegnayd habeen Khamiis ah oo Jimco soo galayso ayaa ka dhacay Xarunta Hay’adda Nabadsugida Qaranka ee NISA. Keenitaanka Xasan Daahir Aweys waxa fududeeyay Cali Yare oo ah Gudoomiye ku Xigeenka Gobolka Banaadir ee arrimaha Amniga, halka Fahad Yasin uu fududeeyay keenitaanka Mukhtaar Roobow.
Sida MOL loo xaqiijiay waxa isna la keenay magalada Muqdisho mid kamida hogaanka sare ee ururka Al Shabaab oo lagu sheegay in uu ka mid yahay raga go’aanka ka gaara qadiyada ururka Al Shabaab. Ninkaan ayaa waxa keenay Fahad Yasin isaga oo lagu keenay gaari ka mid ah kuwa ay leedahay hay’adda NISA ee u gaarka ah Fahad Yasin.
La soco qaybta labaad warbixintaan oo aan uga hadli doono Qodobadii looga hadlay shirkaas, Saameynta ay ku yeelan doonto hogaanka Madaxweyne Lagta Gareen.
Previous articleQarax xoog leh oo ka dhacay Magaalada Muqdisho
Next articleMadaxda D G K/Galbeed oo isbitaalka ku booqday dadkii kusoo dhaawacmay qarax miino
Xog qarsoon xabsiga Godka Jilacoow oo wali shaqeynayaa
Beenta Dagaalka Shabaab lagu Qaadayo waa Khaldid iyo ka jeedin Xaqiiqda...